We Fight We Win. -- " More than Media ": ကိုဇေယျာဝင်း ( အကသ) ဒေါ်ခင်အေးမြင့် ကွယ်လွန်
ကိုဇေယျာဝင်း ( အကသ) ဒေါ်ခင်အေးမြင့် ကွယ်လွန်
ကိုဇေယျာဝင်း ( အကသ) ရဲ့မိခင်ကြီး ဒေါ်ခင်အေးမြင့်ကွယ်လွန်သွားသည်အတွက် မိသားစု
နှင့်အတူ ထပ်တူထပ်မျှ ၀မ်းနည်းရပါကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ပါသည်။
ယနေ့(၂၇-၁၁-၂၀၁၂)နေ့ နံနက်(၂)နာရီ (၁)မိနစ်အချိန်တွင်။ရန်ကုန်မြို့၊တာမွေမြိုနယ်။ ၁၅၅လမ်း။အိမ်အမှတ်-(၄၀) နေအိမ်တွင် ကိုဇေယျာဝင်း(ကုလားလေး)(၈၈-အကသ)၏မိခင် ဒေါ်ခင်အေးမြင့်(၅၉)နှစ်သည် (၉၆)ပါးသော ရောဂါဝေဒနာဖြင့် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါကြောင်းသိရပါတယ်။.ဆွေမျိုးမိတ်သဟာများနှင့်လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်ရဲဘော်အပေါင်းအားအကြောင်းကြားအသိပေးပါသည်။ ရုပ်ကလာပ်ကို (၂၇-၁၁၂၀၁၂ (ဗုဓ္ဒဟူးနေ့) နေ့နေ့လည်(၃)နာရီအချိန်တွင်နေအိမ်မှရေဝေးသုဿန်သို့ပို့ဆောင်ပါမည်။
ဆက်သွယ်ရန်။ ။ကိုဇေယျာဝင်း....Mobile No. 09-450054448 သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။